Shiinaha Neoprene gacmo-gacmeedka taageerada jilbaha warshadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. AoFeiTe
Magaca Product:Neoprene Jilib Taakulo Gacmo Garabyo Jumlo
Shahaadada:CE, FDA, ISO90001
Cabir:SML, Jilib Gacmo
Magaca Badeecada: Neoprene Gacanta jilibka taageer xargaha jumlada
- Iibis kulul Taageerada Jilibka, Gacanta jilibka, Jilibka jilibka, Suunka Jilibka Qalabka jilicsan, khafiifka ah, khafiifka ah, dabacsan, ee waara, ayaa u suurta gelinaya Taageerada jilicsan ee jilicsan ee jilicsanaanta Custom Athletic Crossfit inay ahaato mid raaxo leh isla markaana ilaalineysa jilibka marka aad sameyneyso isboorti iyo tababar jimicsi! Astaamo la aqoonsan yahay ama summad la heli karo ayaa la heli karaa! -Yar yar MOQ! -NDA oo loogu talagalay naqshadeynta qaabeynta ayaa la ballanqaaday! Soosaarida naftaada oo leh qiime tartan iyo gaarsiin deg deg ah!
Waxyaabaha: Spandex, Polyester, nylon Midab: Jaale / madow Cagaar / madow Liin dhanaan / Madoow Dhererka: 32cm Baaxadda: SML XL Isticmaalka: Fulinta, isboortiga, daawada, diiran, ilaalinta, lafaha Astaanta: sumadda waa la soo dhaweynayaa Waqti Muunad: 3-10 maalmood Waqtiga hogaaminta: 15-30 maalmood Faahfaahinta Baakadaha: Bacda Opp, 100Pcs / kartoon
Ma waxaad raadineysaa soo saare jilib jilicsan Neoprene? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan Jilbaha Jumladaha Jumlada ah ayaa leh dammaanad tayo leh. Waxaan nahay Warshadda Shiinaha ee NeopreneJilibka Taageerada Jilibka. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Jilbaha suufka ragga barkinta mashiinka shiidaya
Cadaadis Copper Fabric jilibka darafta
Neefsashada la isku hagaajin karo ee jilibka laliska suufka ...
Jilbaha Isboortiga Isboortiga
Cadaadis Nylon laastik jilicsan Support Brace Sl ...